Ukuba semngciphekweni kwenkqubo ye-WPA2 kubonakala ngathi kulungisiwe kwiimveliso ze-Apple | Ndisuka mac
Izolo emva kwemini iindaba malunga nokuba sesichengeni esifunyenwe kwiprothokholi ye-WPA2 lonke uqhagamshelo lwe-WiFi lufikelele kwinethiwekhi. Ngele ndlela Ingcali kwezokhuseleko uMathy Vanhoef, ebephethe ukwenza ukuba ezi ndaba zibe sesidlangalaleni, ezichaphazela ngokwenene bonke abasebenzisi.
Kwaye unayo iMac, iPC, i-iPhone, i-iPad, imodem, isixhobo se-Android, i-router okanye nasiphi na isixhobo esisebenzisa le nkqubo yokhuseleko i-WPA2 isesichengeni sokhuseleko olufunyenweyo. Ngale ndlela, cacisa ukuba ukusilela kokhuseleko akukothusi kuba ukufikelela emzimbeni kwezixhobo kuthethwa ngazo kuyafuneka, kodwa kubalulekile ukulungisa ingxaki kwaye kubonakala ngathi I-Apple sele inayo.
Uninzi lwethu lunokuzibuza ukuba kulula ukusombulula ingxaki enobungakanani obunje, kuba ayisiyiyo inkqubo ethile yokusebenza okanye efanayo, kwaye impendulo yalo mbuzo nguewe. Ngokulula ngokuhlaziya i-firmware ekude kunokwenzeka ukusombulula okanye ukugubungela umngxunya wokhuseleko oxeliweyo kunye I-Apple sele ikwenzile oku kuzo zonke iimveliso zayo ezisebenzisa le protocol yokhuseleko.
Singafunda kwiAppleInsider ukuba ibug yayisele ilungisiwe kwi-betas yangaphambili ye-macOS, i-iOS, i-tvOS kunye ne-watchOS, pkodwa akukho nto ithethwayo malunga ne-AirPort Extreme, i-AirPort Express kunye noMatshini weXesha. Kule mizila ye-Apple kukho ingxaki yokuba bayekile ngenxa yoko kufuneka ulumke ukuba iApple ithathe isigqibo ekugqibeleni sokumilisela i-firmware entsha ngesiqwengana kubo bonke okanye hayi. Kwimeko yokungayifumani i-firmware, akukho nto inokwenzeka nokuba, kuba iMac, i-iPhone, njl njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umngcipheko we-WPA2 protocol ubonakala ulungisiwe kwiimveliso ze-Apple